Lego ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့် Lego Marvel ဇွန်လထဲမှာလာမယ့် minifigure packs
18 / 05 / 2020 18 / 05 / 2020 ခရစ် Wharfe 5177 Views စာ0မှတ်ချက် 40418 စွန်ငှက်နှင့် Black ကမုဆိုးမ, ၇၆၃၈၆ Hogwartကျောင်းသားများ, အသေးစားအထုပ်များ, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား
အုတ်ဖို နှစ်ခုသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် Lego လာမည့်လတွင်စင်ပေါ်မှာဆင်းသက်နိုင်မည့်အသေးစားပုံစံငယ်များ။ 40418 Falcon နှင့် Black Widow နှင့် 40419 Hogwarts ကျောင်းသားများတွင်လေးခုမှလေးခုပါ ၀ င်သည် Marvel အသီးသီး Super Hero နှင့် Wizarding World themes များ။
စူပါဟီးရိုးအစီအစဉ်တွင် Black Widow နှင့် Falcon တို့၏ Adition များနှင့် AIM ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည်။ Falcon သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအတောင်ပံများတပ်ဆင်ထားပြီး Black Widow သည်လက်မောင်းပုံနှိပ်ခြင်းကိုရရှိသည်။ စူပါဟီးရိုးအသေးစားပုံများအတွက်ရှားပါးသည်
Wizarding World pack တွင် Hogw လေးခုမှကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ ၀ င်သည်artအိမ်များ။ ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Draco Malfoy တို့သည် Gryffindor နှင့် Slytherin အတွက်ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သော်လည်းဟန္နအက်ဘော့သည်သူမ၏အသေးစားရုပ်ပြပွဲကိုပြုလုပ်သည့်အနေဖြင့် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
ချိုချန်းကမူအငြင်းပွားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်artet Ravenclaw အဘို့, များစွာသော Potterheads လည်း၎င်း၏ p အဘို့အလိုလိမ့်မည်တစ်ဗူးထဲမှာarts ။ မီးအိမ်နှင့်စာအုပ်များအပြင် Marauder မြေပုံဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသောသီးသန့် ၂ × ၃ အုပ်ပြားပါ ၀ င်သည်။
နှစ် ဦး စလုံး minifigure packs မှရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com အနည်းဆုံးနှစ်ခုထက်ပိုသောဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင် Marvel အစုံအပါအဝင်ဒီနွေရာသီဖြန့်ချိလိမ့်မည် Lego Marvel ၇၆၁၅၃ Avengers Helicarrier နှင့် Lego Marvel 76152 Loki ၏သေစားသေစေသောအမျက်ဒေါသ.
အသစ်ခြောက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံရှိပါတယ် ကြိုတင်မှာယူမှုမှလက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်.
၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဆက်လက် Brick Fanaticsကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ပါ Lego ကနေအစုံ LEGO.com နှင့် အမေဇုံ ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Super Mario နောက်ထပ်အဝတ်အစားများ
LEGO MASTERS သြစတြေးလျရာသီ ၂ အပိုင်း ၁၁ - နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက် →